bọl feature picnic blanket - China Green Camping Products
Ihi ụra akpa
akpa ndị gbara ọsọ ndụ na-ehi ụra
blanketị na-acha odo odo
Ihe mkpuchi nhicha microfiber
Ulo agha na akpa agha
Beach tent / ndo
Hiking na backpacking tent
Ndenye elu tent
Envelop ehi ụra akpa
Ugboro abụọ okenye akpaihiura
Ihi ụra akpa liner
gbapụta ọwara tent
bọl feature picnic blanket
• Football isiokwu obibi, ihe dị mma maka nkwalite.
• Strong na inogide ahụ na cover flaapu.
• Logo nwere ike e biri ebi na cover flaapu.
• Waterproof ala, adụ aka mmetụta.
• Ndị ọzọ imewe dị n'elu arịrịọ
• Ndị ọzọ size dị n'elu arịrịọ
Top ihe onwunwe: 100% pola ajị anụ
Middle ihe: Ogbo
Bottom ihe: Eva
Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-ama ụlọikwuu PORDUCTS CO., LTD na-guzobere na 2010 na Changzhou obodo, Jiangsu n'ógbè, China. Nke a na-pụrụ iche na-tent, na-ehi ụra akpa, picnic blanket, na-ama ụlọikwuu blanket, onwe-inflatable ute, na-ama ụlọikwuu ngwá ụlọ na ụfọdụ maa ụlọikwuu ngwa. E nwere gburugburu 130 ọrụ anyị factory.
Ewu Top layer Middle layer Bottom layer Technology for stick
Anyị nwere ike na-achị n'ihi nnyocha. All ihe ga-nyochara na niile okokụre ngwaahịa ga-nyochara otu otu n'ihu Mbupu. I nwere ike ịma ma ọ bụrụ na gị na soplaya ka nnyocha maka gị ngwaahịa site ịlele ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla ndabara ibe. Ọ gaghị ekwe omume na 100% nke ha na ngwaahịa izute ọkọlọtọ.
Ọtụtụ n'ime anyị na ngwaahịa na-gburugburu ebe obibi enyi na enyi. Ma, dị ka dị iche iche ahịa nwere dị iche iche chọrọ, biko jụọ anyị maka nkọwa. I nwekwara ike ka anyị mara na gị lekwasịrị ahịa, mgbe ahụ, anyị nwere ike inye ihe ọmụma ndị ahụ.
The kacha nta iji ibu-adabere na dị iche iche ihe na ngwaahịa nkọwa. Nọmalị si 500pcs ka 2000pcs, ụfọdụ ihe ndị ọzọ, ụfọdụ na-erughị. Biko kpọtụrụ anyị maka onye ọ bụla dị iche iche ihe.
N'ihi na n'omume, na-edu ndú oge bụ banyere 7 ụbọchị. N'ihi na uka mmepụta, na-edu ndú oge bụ 45-60 ụbọchị mgbe na-anata ego ugwo. The ụzọ oge irè mgbe (1) anyị natara gị ego, na (2) anyị nwere ikpeazụ unu ihu ọma gị ngwaahịa. Ọ bụrụ na anyị ụzọ ụfọdụ na-adịghị arụ ọrụ na gị n'obi imecha, biko gaa n'elu gị chọrọ na anyị mkpara. N'ọnọdụ nile anyị ga-agbalị nabata gị mkpa. Ọtụtụ mgbe anyị na-enwe ike ime otú ahụ.
Previous: Eserese na-atọ ụmụaka ime ụlọ na n'èzí na-ehi ụra akpa
Next: plaid ebipụta ìhè ibu na-ehi ụra ba
picnic blanket na mmezi nnukwu size
XXL n'èzí picnic blanket
plaid mmiri na-eguzogide ọgwụ picnic blanket
Kids azu paaki picnic blanket
waterproof beach picnic ute
Music ememme picnic blanket
Iwuli 1, beitang ulo oru ogige, hehai Road, Changzhou, Jiangsu n'ógbè, China
Mepụta ụlọikwuu ọhụrụ
Kedu otu ị ga - esi mepụta akpa ihi ụra ka ọ dabara ...
Etu esi ewepụta akpa ụra snag
Gbara oso, osote ihe ozo emere na COVID 19
Ugbo agha agha
© nwebisiinka - 20108-2020: Edebere ikikere nile.